Diiwaan Geliyaha ugu Xun abid abid
Talaado, Juun 28, 2016 Talaado, Juun 28, 2016 Douglas Karr
Saaka waxaan ka helnaa wicitaan waali ah macmiil. Waan la shaqeynay iyaga si aan u horumarinno goob cusub in yar ka dib, laakiin wax walbana waxay ka ahaayeen offline hadda. Arrin DNS ah nooc ka mid ah. Ninkooda IT-ga ayaa na soo wacay si aan u aragno haddii aan wax beddelnay. Kama aanan ahayn laakiin had iyo jeer waan necbannahay inaan maqalno dhibaatooyinkaas oo waxaan dooneynay inaan ka caawinno iyaga inay dhibaatada xalliyaan. Mararka qaarkood waa wax u fudud sida haysashada kaarka deynta duug ah
Farshaxanka Sirta ee Suuqgeynta Dijital ah
Talaado, September 10, 2013 Wednesday, September 11, 2013 Douglas Karr
Xogtan macluumaadka ah ee ka socota Hostgator waxay ku faantaa inta udhaxeysa xayeysiinta iyo dhiirrigelinta, qalabka iyo dhacdooyinka suuqgeynta dhijitaalka ah ee dhabta ah. SEO waa istiraatiijiyad, laakiin falanqaynta maahan istiraatiijiyad - waa aalad lagu caawinayo go'aaminta istiraatiijiyadda. Suuqgeynta lacag bixinta waa qeyb kamid ah istiraatiijiyad guud laakiin ma ahan istiraatiijiyad iyada lafteeda iyo nafteeda. Beddelkuna istiraatiijiyad ma aha, ee waa natiijada istiraatiijiyad. Nooc qariib ah sida ay isugu dhejiyeen, laakiin waxaa jira xoogaa qalab ah, maqal,